Musiibadii Arsenal waxaa u sabab ah saddex xiddig oo laga helay coronavirus kahor kulankii Man City… (Miyey ka qayb qaateen kulankii Etihad?) – Gool FM
Musiibadii Arsenal waxaa u sabab ah saddex xiddig oo laga helay coronavirus kahor kulankii Man City… (Miyey ka qayb qaateen kulankii Etihad?)
(London) 22 Juun 2020. Bandhigga liita ee kooxda Arsenal ayaa lagu soo warramayaa inuu sabab u noqday xanuunka coronavirus oo toddobaadkii hore laga helay saddex ka mid ah ciyaartoydeeda, taasna ay qasabtay inay tababarka ka baxaan ka hor kulankii ay la ciyaareen Manchester City.
Gunners ayaa laba guuldarro oo xiriir ah kala kulantay Man City oo ku dhufatay 3-0, iyo Brighton & Hove Albion oo 2-1 ku suul daartay kaddib kulammo ay la kala ciyaartay kooxahan Arbacadii iyo Sabtidii, waxayna si liidata ku billaabatay dib usoo laabashada horyaalka Premier League.
David Ornstein oo wax ku qora majaladda The Athletic ayaa laga soo xiganayaa in dhibaato culus ay soo food saartay Arsenal, taasoo cuuryaamisay hammigoodii guulaha, waxaana uu ku soo warramay in maalmo ka hor kulankii City lagu war galiyay in mid ka mid ah xiddigahooda laga helay cudurka coronavirus.
Sidaas darteed, xiddiga laga helay cudurka ayaa ka baxay tababarka, maadaama lagu amray inuu is karaantiilo muddo toddobo maalmood ah,iyo inuusan ka qayb galin kulankii ay Arsenal booqatay Etihad.
Waxaa intaas dheer in xiddiga cudurka laga helay oo aan magaciisa la shaacanin uu kulammo joogto ah la yeeshay labo ka mid ah saaxiibbadiisa kooxda, waxaa iyaguna lagu amray inay 14 maalmood kali u noollaadaan.
Si kastaba ha ahaatee, ma jirin mid ka mid ah xiddigahan oo ay ka muuqdeen calaamadaha COVID-19, sidoo kalena ma jirin ciyaaryahann laga helay cudurkan wareeggii hore ee baaritaanka, sidaas darteed, Gunners ayaa ka shakisan in natiijooyinka sheegaya in ciyaartoydeeda laga helay coronavirus ay tahay mid aanan sax ahayn ama been abuur ah.
Intaas kaddib, Arsenal ayaa baaritaan gaar ah ku celisay xiddiga laga helay xanuunka, waxaana natiijada baaritaankaas ay sheegtay inuusan qabin coronavirus, balse, maadaama uu ahaa baaritaan hoose, maamulka Premier League ma aysan shaacin xaaladdaas.
Sidaas darteed, xiddiga laga helay cudurka iyo labada laacib ee iyaguna la karaantiilay ayaa tababarka ka maqnaa maalmo dhowr ah kahor baaritaankii labaad oo dhacay Isniintii aynu soo dhaafnay, iyadoo natiijada ay soo baxday maalintii xigtay oo Talaado ahayd, waxaana ay tababarka soo xaadireen 5:00 galabnimo xilliga England.
Tababarkaas waxa uu ahaa kii ugu dambeeyay ee ay Arsenal sameyso kahor kulankii ay u safreen magaalada Manchester oo ay Arbacadii kula soo ciyaareen kooxda uu hoggaamiyo Pep Guardiola.
Dhammaan saddexda ciyaaryahan ayaa la rumeysan yahay inay kooxda u raaceen safarkii ay ku tagtay Etihad, iyagoo qayb ka ahaa safkii kooxda ee kulankaas loo xushay inkastoo aanan la kala caddeyn inay garoonka galeen iyo in kale, balse maqnaashahoodii tababarradii muhiimka ahaa ayaa aafeysay diyaar garowgii Macallin Mikel Arteta.